ပုံပြင်မဟုတ်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » ပုံပြင်မဟုတ်ပါ
Posted by နွယ်ပင် on Dec 27, 2010 in Short Story |6comments
အရာရှိဖြစ်ရတာလည်းမနိပ်ပါဘူးဗျာ… ရဲဘော်ဘဝတုန်းကမှ အဆင်ပြေသေးတယ်။”
မိသားစု အတွက်ဆိုတော့ လည်း ….
ထောင်ကျတယ်ဆိုတော့ ..ကျန်ရစ်တဲ့မိသားစုတော့ ဒုက္ခပဲနော..။
ပြောရရင် … အဲဒီစာထဲပါတဲ့.. ထောက်လှမ်းရေးက လူတွေ.. အရာရှိကြီးတွေခမျာလည်း … အမည်တွေနဲ့ ဒီအချိန်မှာ ပြန်တိုက်ကြည့်ရင် … အကုန်လိုလို ဒုက္ခတွေချည်းနဲ့ ဖြစ်နေလောက်ပါပြီ။
အဲ့ဒီအခါကျရင် ပိစိကွေးလေးက ရှေ့ဆုံးကသွားကြည့်ပြီးလက်ခုပ်တီးနေမှာ
အယောက် 20 ပဲခေါ်မှာနော်…….
စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ တစ်ခါလေးခိုးစားတာနဲ့ မိသွားရော။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်လည်း သူခိုးတစ်ယောက်ပါပဲ။လျှပ်စစ်မီး အမြဲခိုးသုံးတယ်။ ခိုးကူးခွေ အမြဲအားပေးတယ်။ ခုမှပြန်တွေးကြည့်ရင် ကြောက်စရာကြီး။ ကျွန်တော်သေရင် အောက်ပဲ။ ကျွန်တော် ခိုးသုံးတာ သိန်း၅၀ ဘိုးတောင်မကတော့ဘူးထင်တယ်။
It reminded me of Sayagyi Shwe-U-Daung’s words. He said, “The real test of your will and morality depends on the situation one is in; if one can keep his or her morality intact inacrisis situation then one can be regarded asamoral person.” We haveasaying in Burmese that , ‘hsankho mami; phwe-kho mi’ (the thief who stole rice was not caught but the thief who stole chaff was caught). We haveavery big thief who stole enough to buy Manchester United for his grandson need not haveaworry to get caught but an naval officer who tried to sellapistol was caught and punished. Where is justice one might ask. As one karma ripens no one can prevent them from facing the justice they deserved. At present they are know to the world as thieves no matter what they might think of themselves. That’s the justice that they are facing right now.
အော် ဘ၀……..မရှိတော့ လည်း…ရှိအောင်လုပ်ရတာနဲ့ ဒုက္ခတွေ့ ။
ရှိတော့ လည်း ပိုရှိရအောင်လုပ်နေရတာနဲ့ ဒုက္ခ….။ (တရားပေါက်သွားသောလေသံဖြင့်)